Juan Tranche. Kubvunzana nemunyori weSpiculus | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo: Juan Tranche. Twitter nhoroondo.
John Tranch Ndanga ndiri mubazi rekutsikisa kwenguva yakati, neine kufarira kwakanyanya uye kwakanangana nekudzidza kwe Roma yekare uye nyika yechinyakare. Zvino kana achinge asvetukira kumusika neruzivo inotaurira nyaya yeanozivikanwa gladiator, Spicules. Ndinoonga chaizvo nguva yako, kuzvipira uye mutsa kune izvi indavhiyu kwaanotaura nezvake nedzimwewo nyaya.
Juan Tranche - Bvunzurudzo
BHUKU NEWS: Spicules ndiyo kodhi yako yekutanga mune yemhando yemhando. Chii chaunotiudza nezvazvo uye iyo pfungwa yakabva kupi?
Kwemakore Ini ndinonzwa chimwe chinhu chisingatsanangurike chenyika ye gladiator uye Spiculus yaive imwe yeakanakisa wenguva dzose. Zvagara zvichindibata kuti munhu wese akanzwa sei nezveava varwi vakasiya hupenyu hwavo munhandare, asi hapana anoziva chero akambovapo. Spartacus, ane mukurumbira wenguva dzese, akazviita zvekutungamira kupandukira kwemuranda, kwete kuve gladiator akanaka. Mune nzanga yatinoda kuyera budiriro nekupa mibairo uye kushongedza kweanenge zvese zvinhu, zvirinani kuti ndakazviwana ichida kuziva. Ndakatora mukana dhata diki kuti isu tinaye nezvake uye shungu dzandinonzwa dzenguva iyoyo kuti nditaure, kwete chete nyaya yake, asiwo kuunza ino nyika inoshamisa kubva muruoko rwevamwe shamwari vanotarisana mumwe nemumwe muRoma yaMambo Nero.
AL: Unogona kudzokera kubhuku rekutanga iro rawaverenga? Uye nyaya yekutanga iwe yawanyora?
Bhuku rekutanga randinorangarira kuchikoro raive nhoroondo yePompeii akaudza vana uko protagonist yainzi Sofia. Bhuku riya rakandimaka nekuti takakwanisa kuita musangano nemunyori. Kunze kwechisungo chekuverenga muchikamu chedzidzo, bhuku rekutanga randakaverenga ndoga nderangu Mbiru dzenyika. Ndaida. Kubva ipapo handina kuzombomira kuverenga uye ini ndinoedza kuparadzira kuda kwangu kuvanasikana vangu.
Nezve kunyora. Chinhu chega chandakanyora muhupenyu hwangu hwese, kudzamara ndafunga kutaura nyaya yaSpiculus, vaive rudo tsamba ndine makore gumi nemashanu uyo ​​nhasi mudzimai wangu. Ndakanga ndisati ndambonyora nyaya, kana chero chinhu chakadai, asi ndinovimba handina kuzombosiya ichi chivara chave chishuwo.
Chokwadi ndaizogara naye Ken follet nekuti mabhuku ake akaita kuti ndide nhoroondo yenhoroondo. Zvakare Santiago Posteguillo mune iyi genre uye, zvirokwazvo, Juan Eslava Galan, sezvo ndichinamata nyika yeRoma nekuda kwemabhuku ayo. Mune mamwe marudzi andinofarirawo, senge anonakidza kana ematsotsi, ndinoavada zvakanyanya Santiago Díaz naCarmen Mola.
silla, mutungamiriri mukuru weruzivo GladiatorsnaRoger Mouge. Ndichiri kushamisika kuti uyu munhu angafunge sei mumamiriro akasiyana kana kuti aizoita sei mune akasiyana. Ehe, ndinoziva izvi zvinoita sekushamisa. Ndingadai ndakadawo kugadzira, kwete zvakanyanya kuziva, Alice gould protagonist we Mitsara yakakombama yaMwarinaTorcuato Luca de Tena.
Muchikamu chekunyora, mumhanzi we ruzha saMax Ritcher, Hans Zimmer uye nguva dzose zvinoenderana nechiitiko chandiri kusimukira. Zvakare, haimbofi yakashaikwa kofi uye chokoreti. Kana zviri zvekuverenga, hapana. Ndine kugona kukwirira kwakanyanya uye zvisinei kuti pane kurira kwakandikomberedza kana kuti vanasikana vangu vane ruzha zvakadii, terevhizheni ndinopinda muchiitiko pandinoverenga.
Kunyora, sezvandataura, usiku nepatafura patafura yekutandarira. Kuverenga Ini ndinoda cheya chemaoko mukamuri remwanasikana wangu, pasofa iri mumba yekutandarira, imba yekurara, kicheni, teru. Muchidimbu, handina basa nazvo saiti nekuti ini ndine shungu yekuverenga. Asi, dai ndaifanira kugara nenguva chaiyo yandaizosarudza mukati Zuva, mune hamoku nenzwi regungwa kumashure.
Ndakaverenga zvinenge zvese. Ini ndinoda novel nhoroondo uye inoverengeka nhema uye ndinoisanganisa ne kudzidzira. Ini ndinofunga iyo yega genre yandisati ndamboverenga ndeye yerudo inoverengeka, asi ini handizvitonge kunze.
Izvozvi ini ndichangopedza: Hapasisina masango ekudzokera, naCarlos Augusto Casas, wandinoda chaizvo. Ini ndichangotanga kuverenga: Iyo alanonaJose Zoilo Hernández.
Kunyora, ndiri kupedzisa yangu yechipiri novel ko nezve gladiator vakadzi.
AL: Iwe unofunga kuti nzvimbo yekutsikisa iri sei uye chii chakasarudza iwe kuyedza kutsikisa?
Nhasi kune kwakawanda kupihwa kupfuura nakare uye, nerombo rakanaka, mabhuku anogona kutengwa chero mutengo. Idzi inhau dzakanaka nekuti dzinotendera tsika kuti dziwanikwe kune ese mabhajeti uye nezvose zvido. Kune zvekare mikana iyo yaimbove isipo nekuda kweiyo kuzvishambadza izvo zvakatendera vanyori vekutanga, avo vakamboona zvisingaite kuzadzisa zviroto zvavo, mukana wekugadzirisa mabasa avo. Ndakaedza nekuti ini hapana chandakarasikirwa nacho uye zvese zvekuwana uye, pasina kupokana, ndakaita sarudzo chaiyo kubvira, kubvira pandakanyora SpiculesZvinoshamisa kuti rakandipfumisa zvakadii.
Chokwadi ndechekuti handizivi. Spicules Zvakauya pachena mwedzi mishoma yapfuura, saka, ini ndangoziva ino nguva. Saka zvese zvandinoenda nazvo zvakanaka kwazvo. Kana zviri kuuya zviri nani, ndiri kutarisira kuzvirarama.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Juan Tranche. Kubvunzana nemunyori waSpiculus
Ken Follet: mabhuku